Ukuzivocavoca kwe-5 ye-Yoga kunye ne-Yoga yoBuhlungu beNgasemva (ukuZolula) | Vondt.net
Imithambo emi-5 yeyoga yokufumana iintlungu zangasemva
06 / 06 / 2016 /0 Amazwana/i Amanqaku mfanelo, Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca, Emva, elula Ubonisa/av ubuhlungu
Akukho mlinganiso weenkwenkwezi okwangoku.
Ngaba ukhathaza umqolo wakho? Nazi i-5 zeYoga Exercises ezinokukunceda ukuba unyuse ukuhamba kwakho ngasemva kunye nokunciphisa iintlungu zangasemva. Zive ukhululekile ukuba wabelane nomntu onentlungu yangasemva.
Ukuzivocavoca nge-yoga kunye ne-yoga kunokuba luncedo xa kufikwa ekuphumuleni kwezihlunu eziqinileyo kunye nezihlunu. Uninzi lwethu luhlala kakhulu kubomi bemihla ngemihla kwaye lubangela ukuba izihlunu ngasemva, ngasemva kwamathanga nesihlalo zixineke kakhulu. Ukolula rhoqo kunokuba ngumlinganiso olungileyo wokulwa nezihlunu ezomeleleyo kunye nokuqina kwamalungu.
1. «Ūrdhva mukha śvānāsana» (Ukujonga indawo yenja)
Isikhundla seyoga sivula isifuba, solule izihlunu zesisu kwaye sisebenzise umva ongezantsi ngendlela elungileyo. Qala ngokulala phantsi phantsi kunye neentende zakho phantsi phantsi malunga neembambo. Emva koko tsala imilenze yakho kunye ucinezele umphezulu weenyawo zakho ucinezelelwe phantsi - ngaxeshanye usebenzisa amandla avela ngasemva, hayi izandla zakho, ukuphakamisa isifuba sakho phantsi. Gcina imilenze yakho ithe tye kwaye ubambe indawo yesi-5 ukuya kweli-10 yokuphefumla okunzulu. Phinda amaxesha amaninzi kangangoko ucinga ukuba kuyimfuneko.
2. "Ardha Matsyendrasana" (Ukuzilolonga ukujikeleza)
Esi sikhundla seyoga sinika ukwanda kokuguquguquka kunye nokuhamba kumqolo kunye nezihlunu zangasemva. Inokuba ngumthambo onzima, ke sukuzama oku ukuba awuziva ukhululekile ngolunye uqeqesho kweli nqaku. Thatha umoya omninzi kwaye ujike ngokuzolileyo uye ecaleni - musa ukujija, kodwa kungcono uhambe ngokuzolileyo ecaleni. Bamba indawo yokuphefumla okunzulu okungu-7-8 uze uphinde kwelinye icala.
3. Marjariasana Bitilasana (Ukuzilolongela ikamela)
4. I-Balasana (Isifuba kunye nokuzolula umva)
Yima emadolweni kwaye uvumele umzimba wakho uwele ngaphambili ngeengalo zoluliwe. Phumlisa intloko yakho emhlabeni kwaye wolule iingalo zakho phambi kwakho ude waziva ulula kancinci xa uguquka uye entanyeni nasemva. Yenza iiseti ezi-3-4 ubude bexesha lemizuzwana engama-30.
5. «IKapotasana» (iDuestillingen)
Indawo ye-pose inokuba ngumceli mngeni kubaqalayo kuba ifuna ukuba kuguqulwe umvambo kunye edolweni. Isizathu esisebenzayo kukuba ii-hips eziqinileyo zinokuba negalelo kwintlungu yangemva. Bamba isikhundla se-5 ukuya kwi-10 zokuphefumla okunzulu, emva koko tshintshela kwelinye icala kwaye uphinde kwakhona njengoko kufuneka.
Le yimithambo efanelekileyo yeyoga ekufuneka ikhethwe yonke imihla ukuze isiphumo siphezulu- kodwa siyazi ukuba iintsuku eziphakathi evekini azisoloko zikuvumela oku, ke thina ukwamukela nokuba uyayenza yonke imihla.
Kufuneka ndenze umthambo kangaphi?
Konke kuxhomekeke kuwe. Fumanisa ukuba yeyiphi esebenzayo kuwe ekuqaleni kwaye wakhe kancinci kodwa ngokuqinisekileyo uye phambili. Khumbula ukuba ukuzilolonga kungakhokelela ekuthambekeni kwasekuqaleni, njengoko ngokuthe ngcembe uqhekeza iindawo ezonakeleyo (izicwili ezonakeleyo kunye nezicwili ezibomvu) kwaye ubeke endaweni yazo izicwili ezithambileyo ezisempilweni. Oku kunokuba yinkqubo echitha ixesha kodwa inomvuzo kakhulu. Ukuba unesifo, sicela ukuba ubuze ugqirha wakho ukuba ngaba le mithambo ingaba luncedo kuwe- unokuzama ngononophelo olukhulu. Ngaphandle koko sikukhuthaza ukuba uhambe kwaye uhambe uhambo olumqengqelezi ukuba kunokwenzeka.
Zive ukhululekile ukuba wabelane ngezi zinto kunye noogxa, izihlobo kunye nabaqhelileyo. Ukuba ungathanda ukuzivocavoca okuthunyelwe njengoxwebhu olunokuphindwaphindwa nokunye okunjalo, siyakucela ezifana kwaye uqhagamshelane ngeFacebook iphepha apha. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, zinike nje Nxibelelana nathi.
IPHEPHA ELANDELAYO: - Umqolo obuhlungu? Kuya kufuneka uyazi oku!
Iimveliso ezikhuthazwayo zokuphelisa iintlungu kwintlungu
I-Biofreeze (Cold / cryotherapy)
Zama: Ingcebiso elungileyo kunye neMilinganiselo yokuchasene ne-ISJIAS
Ukulimaza i emva og entanyeni? Sincoma wonke umntu oneentlungu zangasemva ukuba azame ukonyusa uqeqesho olujolise esinqeni nasemadolweni.
Zama le mithambo: -Imithambo yamandla emi-6 yeehips ezinamandla
Ngaba uyazi ukuba: -Inyango ebandayo inokunika isiqabu seentlungu kumalungu aqaqanjelwa nezihlunu? Phakathi kwezinye izinto, I-Biofreeze (ungay-odola apha), equlathe ikakhulu iimveliso zendalo, yimveliso ethandwayo. Nxibelelana nathi namhlanje kwiphepha lethu le-Facebook ukuba ufuna ezinye iingcebiso ezilungiselelwe wena.
Inqaku elidumileyo: -Unyango lwe-Alzheimer olutsha lubuyisela inkumbulo egcweleyo!
Funda: -Iglasi yotywala okanye iwayini yamathambo omeleleyo? Ewe Nceda!
-Ngaba ufuna ulwazi ngakumbi okanye unemibuzo? Buza oochwephesha abaqeqeshiweyo malunga nezempilo Facebook Page.
VONDT.net-Nceda umeme abahlobo bakho ukuba bathande indawo yethu:
Sibanye inkonzo yasimahla apho u-Ola noKari Nordmann banokufumana iimpendulo kwimibuzo yabo inkonzo yethu yasimahla yokubuza malunga neengxaki zempilo yemisipha-engaziwa ngokupheleleyo ukuba bafuna njalo.
Imifanekiso: I-Wikimedia Commons i-2.0, iiCreative Commons, iiFreestockphotos kunye neminikelo / imifanekiso ethunyelweyo.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yogaklasse.jpg?media=1648573622 393 750 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2016-06-06 19:52:582022-03-18 17:25:18Imithambo emi-5 yeyoga yokufumana iintlungu zangasemva
ISIFUNDO: Amanqanaba eStrawberry Anciphisa iCholesterol ISIFUNDO: Ingxubevange kwioyile yeOlive inokubulala iiseli zomhlaza